Dugsiyada Gaajada-La'aanta ah - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-la'aanta
Ilmo kastaa wuxuu u qalmaa Bilaw caafimaad qaba Maalinta Dugsiga
Hiigsigeena Dugsiyo Gaajada Ka Xorta Ah
Waxaan u aragnaa cunto dugsiyeedka caalamiga ah ee ilmo kasta, halkaas oo cuntada dugsigu bilaash u tahay dhammaan ardayda K-12 ee Oregon iyo gobol kasta.
Ilmo kastaa wuxuu mudan yahay bilow caafimaad qaba oo nolosha ah. Cuntooyinka caafimaadka qaba ee dugsiga ayaa ka caawiya carruurta inay bartaan, koraan, oo koraan. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in caruur aad u badan oo Oregon ah ay la kulmaan gaajo iyo cunto yari. Iyadoo afartii carruur ahba mid ka mid ah ee ku nool gobolka Oregon ay haysato cunto yari, qoysas badan ayaa ku tiirsan cuntada dugsiga baahidooda nafaqo.
Hindisaha Iskuullada-Gaajo-la'aanta, oo la bilaabay 2018, wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo ballaarin lahaa gelitaanka cuntada dugsiga iyada oo loo marayo u doodista siyaasadda gobolka iyo federaalka. Gaajada-Free Oregon ayaa horseeday isbahaysiga ballaarinta helitaanka cuntada dugsiga ee bilaashka ah ee gobolka, kaas oo la ansixiyay sharciga 2019, taasoo ka dhigaysa Oregon hogaamiyaha qaranka ee gelitaanka cuntada dugsiga. Maanta, waxaan sii wadeynaa shaqadaan annagoo u ololeyneyna federaalka xooggan ee cuntada dugsiga caalamiga ah.
Guulo Awood leh oo loogu talagalay Qoysaska Oregon
Ololaha Dugsiyada Ka-La'aanta Gaajada waxa ay keentay in la meel mariyo nidaamka cuntada dugsiga oo dhammaystiran, oo lagu daray Xeerka Guusha Ardayda 2019, si loo hagaajiyo helitaanka cuntada dugsiga ee dhammaan ardayda. Waxaan aad ugu dadaalnay in aan hubinno in sharciga loo dejiyay si ay uga faa'iideystaan ​​bulshooyinka halista ugu badan ugu jira gaajada. Baro wax badan oo ku saabsan ololahayaga Iskuulada Bilaashka ah ee Gaajada 2019.
Maalgelinta cusub ee cuntada dugsiga waa:
Dugsiyo badan oo bixiya cuntada dugsiga caalamiga ah: Oregon waxa ay ku kordhinaysaa kharashka dawladda dhexe ee cuntada dugsiga si ay dugsiyo badani u doortaan barnaamij u oggolaanaya in ay ku bixiyaan dhammaan cuntooyinka dugsiga lacag la'aan (Provision Eligibility Provision). Marka nidaamkani si buuxda u dhaqan galo, waxaa lagu qiyaasaa in 62% ardayda Oregon ay tagi karaan dugsi siiya cunto dugsiyeed bilaash ah dhammaan ardaydiisa.
Carruur badan oo u qalma cuntada dugsiga ee bilaashka ah: Ardayda qoysaskoodu ay helaan inta u dhaxaysa 185% iyo 300% ee khadka fakhriga ee federaalka (FPL) hadda waxay u qalmaan cuntada lagu bixiyo lacag la'aan, korodhka 37% qoysaska cunto yaridu hayso.
Korodhka lama filaanka ah ilaa Quraacda Gambaleelka kadib: Dhammaan dugsiyada leh 70% ama in ka badan oo arday ah oo u qalma cunto bilaash ah ama qiimo jaban oo federaali ah ayaa hadda ka dhigaya quraac bilaash ah oo ay heli karaan dhammaan ardayda ka dib maalinta dugsigu bilaabo.
Wax badan ka baro Cunnooyinka Dugsiga ee Bilaashka ah
Hal Pager: U-qalmitaanka Cunnada Dugsiga wuu is beddelay! Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato (2021)
Warbixinta: Helitaanka Cunnada Dugsiga Oregon inta lagu jiro Faafida Covid-19: Caqabadaha, Dhaqannada ugu Fiican, iyo Talooyinka Siyaasadda (2021)
Daraasad Kiis: Ololaha Dugsiyada Ka Xorta ah Gaajada (2019)
Hal Pager: Ku Fududeynta Ardayda Guusha: Sharaxa Siyaasadda (2019)
Ilaha loogu talagalay Xirfadlayaasha Cuntada Dugsiga
Quraacda Kadib Hagaha Hirgelinta Dawanka
Quraacda Kadib Qalabka Dawanka ee Macalimiinta, Maamulayaasha, iyo Barayaasha kale
Bogga internetka ee Quraacda Dugsiga
Qaado tallaabo aad ku joojinayso gaajada